Kylian Mbappe oo ka dhaawacmay PSG kaliya afar maalmood ka hor kulanka afar dhammaadka Champions League ee ay la leeyihiin Manchester City – Gool FM
Kylian Mbappe oo ka dhaawacmay PSG kaliya afar maalmood ka hor kulanka afar dhammaadka Champions League ee ay la leeyihiin Manchester City
Haaruun April 25, 2021
(Paris) 25 Paris 2021. Kylian Mbappe ayaa ka dhaawacmay Kooxda PSG kaliya afar maalmood ka hor kulanka ay la leeyihiin Naadiga Manchester City ee afar dhammaadka Champions League.
Daqiiqaddii 87-aad ayaa garoonka dhaawac looga saaray xiddiga reer France ee Kylian Mbappe kulankii ay kooxdiisa PSG 3-1 kaga adkaatay xalay fiidkii naadiga Metz.
Mbappe ayaa dhaliyey labo ka mid ah goolasha ay kooxdiisu ku adkaatay kulankan, laakiin nasiib-darro waxa uu garoomada kaga baxay dhaawac iyadoo daqiiqado kooban ay ka harsan yihiin kulanka.
Dhaawac ayaa ka soo gaaray muruqa markii Kylian Mbappe uu isku dayay inuu kubadda la dhaafo Habib Maiga daqiiqaddii 83-aad, waxaana markii garoonka laga saaray u soo galay PSG, Julian Draxler, kaasoo ciyaaray afartii daqiiqo ee ciyaarta ugu dambeysay.
Macallin Mauricio Pochettino oo ka hadlay dhaawaca Kylian Mbappe ayaa niyadda u dajiyey Jamaahiirta Kooxda Paris Saint-Germain, waxaana uu xusay inuu da’yarkan reer France diyaar noqon doono ka hor kulanka Arbacada ee ay la leeyihiin naadiga reer England ee Manchester City.
“Muruqa ayay jug ka soo gaartay, balse waa uu fiicaan doonaa Arbacada.” ayuu yiri Pochettino oo ciyaarta kaddib Saxaafadda kala hadlay dhaawaca Kylian Mbappe.
Dhaawaca soo gaaray Kylian Mbappe ayaa wadne qabad ku ah kooxda PSG oo Arbacada soo aaddan garoonkeeda Parc des Princes ku soo dhoweyn doonta Manchester City kulanka lugta hore ee afar dhammaadka Champions League.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, kooxda reer France ee PSG ayaa la filayaa inay warbixin rasmi ah ka soo saarto xaaladda dhaawac ee Weeraryahankeeda Kylian Mbappe maanta oo Axad ah ama berri oo Isniin ah.
Wixii warar ah ee ku soo kordha dhaawaca Kylian Mbappe kala soco GOOL FM.
Kooxda Ajax oo shaacisay qiimaha ay ku iibinayso xiddigeeda boosaska kala duwan ka ciyaara ee Nicolas Tagliafico
Kooxaha Manchester United iyo Liverpool oo iskula dheggan Weeraryahan ka ciyaara dalka Talyaaniga